TOLOM-BAHOAKA KIANJA 13 MEY: Mitaky ny hanjakan’ny Demokrasia ny Filohan’ny Tetezamita Andry Rajoelina | Madatopinfo
TOLOM-BAHOAKA KIANJA 13 MEY: Mitaky ny hanjakan’ny Demokrasia ny Filohan’ny Tetezamita Andry Rajoelina
“Tsy misy kabary politika fa fiaraha-miory amin’ireo fianakavian’ny mahery fo an’ny tanindrazana ny androany. Mitaky isika mba hanjaka eto Madagasikara ny Demokrasia. Tsy azo ekena ny hery famoretana amin’ny fitakian’ny vahoaka”. Io no tenin’ny Filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Nirina Rajoelina, raha nitafa tamin’ny havan’ireo manamanjo sy ny vahoaka aman’alinkisa, teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey izy, ny tolakandron’ny Alatsinainy 23 Aprily. Nampanantena izy fa mbola handray an-tanana ny ho avin’ireo kamboty sy ireo nilaozan’ny havany. Marihina moa fa nitondra fehezamboninkazo ho an’ireo nody mandry izy, nandritra ny fanomezamboninahitra farany ireo vatana mangatsiakan’ireo lavon’ny balan’ny mpitandro filaminana ny 21 Avrily farany teo. Nampihetsimpo ny maro ny nahita ity Lehiben’ny MAPAR izay nankahery sady nitrotro ary nanafosafo ilay zazavavy kamboty iray. Marihina moa fa ny marainan’ny Alahady 22 Aprily ity zaza ity vao nahita ny rainy fa maty noho ny tolona ka nigogogogo tsy azo nampanginina tao amin’ny tranom-patin’ny HJRA. Raha nilaza taminy ny reniny fa maty ny dadany, tsy nety nino izy fa nandresy lahatra hatrany fa tsy maty fa marary ny dadany. Maro tamin’ireo naheno sy nahita ny sary tamin’ny haino aman-jery ary ny tambazotra no latsa-dranomaso, ontsa raha nahita izany fahoriana tsy roa aman-tany izany izay nianjady tamin’ity zaza ity. Ny talata 24 Aprily, tonga nanatevina ny fitakian’ny Solombavambahoakan’ny Fiovana ho fametraham-pialan’ny Filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina ny CST sy CT rehetra izay nandrafitra ny Antenimiera roa tonta nandritra Fitondrana Tetezamita teo aloha.
Tetsy andaniny, nitafa tamin’ny mpanao gazety sy nampita hafatra mivantana tamin’ny vahoaka Malagasy tamin’ny alalan’ny haino aman-jerim-pirenena TVM sy RNM ary ireo haino aman-jery tsy miankina miara-dia amin’ny fitondrana HVM. Nohantitranterin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa : “Madagasikara dia manaja sy miaina anaty Demokrasia; ny fanodikodinana ny hetsika tamin’ny Sabotsy 21 Avrily teo dia endrika fanonganam-panjakana. Fanjakana tandalàna i Madagasikara. Hany ka mapitandrina mafy ireo mpamboly korontana aho, izay mandranitra fankahalana, sy mitady rà mandriaka ary sahy mandatsakaina ho an’ireo tsy manantsiny; mampitondra takaitra an’ireo ankizy madinika. Handray an-tanana azy ireny ny Fanjakana. Aoka mba hiaro ny ara-dalàna sy ny andrim-panjakana ara-demokratika ny mpitandro filaminana”. Io teny hentitra avy amin’ny Filoham-pirenena io dia nifameno tamin’ny fanambaran’ny Praiminisitra Solonandrasana Olivier sy ny Filohan’ny HVM, ny harivan’ny Sabotsy 21 Aprily, izay niantson’izy ireo fifampiresahana. Marihina moa fa ny tena fototry ny olana dia ireo lalam-pifidianana fototra sy ho an’ny filoham-pirenena ary ny ho an’ny Solombavambahoaka izay nolaniana amboletra nolazaina fa tao anatin’ny kolikoly sy ankerisetra ny 3 Aprily lasa teo. Ireo Solombavam-bahoaka 97 izay nandany azy dia noheverina notambazana vola 50 tapitrisa Ariary isam-batanolona, izay nohapangain’ireo namany 73 fa kolikoly avo lenta. Ireto farany anefa niapanga fa tsy ampy 79 ireo nandany ny Lalana fehizoron’ny fifidianana, satria mihoatra lavitra ny isa izany raha efa tsy ao ireo tsy tonga, sy nandefa iraka any ivelany ary ireo mpisolo ny efa nody mandry izay mbola tsy tafapetraka. Nanambara ihany koa izy ireo fa misy ny fanisana indroa ny solombavambahoaka iray ary misy ny solombavambahoaka iray nanangana tanàna roa. Ny isa 79 tsy niova nandritra ny fotoana lava izay nandaniana andin-dalana anjatony ihany koa nampametram-panontaniana azy ireo satria nahatsikaritra ireo mpifanandrina aminy izay namonjy toeram-pivoahana izy ireo. Izany tatitra izany no saika hatao teo amin’ny Lapan’ny tanàna, kinanjo miafara amin’ny fitakiana ny fametraham-pialan’ny Filoha ankehitriny noho ny halafon’ny vidim-piainana, sy ny ny varotra tanindrazana ary ny kolikoly eo anivon’ny fitondrana. Ny 24 Aprily, nanizingizina ny Solombavambahoaka TIM Hanitra Razafimanantsoa, fa ny fanovana ny andalany faha-47 amin’ny Lalam-panorenana no tena isehoan’ny fitiavantenan’ny mpitondra ankehitriny izay tsy mety hametram-pialana nefa sady te hirotsaka ho fiadiana.
Governemanta iara-mitantanana hanomanana fifidianana ho an’ny TIM
Manoloana ny tolom-bahoaka eny amin’ny kianjan’ny 13 Mey dia nanamafy ny fivoahana amin’ny krizy, amin’ny alalan’ny fifampiresahana sy ny fifidianana ary ny governemanta iraisana ny avy ao amin’ny Antoko Tiako i Madagasika. Ny vadin’ny Filohan’ny Antoko Marc Ravalomanana dia niantso ny FFKM mba hanelanelana sy handray an-tanana ny fifanakalozan-kevitra. “Mitodika aminareo raiamandreny eo anivon’ny Fiangonana ny tenako mba hanelanelana sy hitady vahaolana amin’ny alalan’ny fifampiresahana. Aoka samy ho tony ka handala ny soatoavina maha-malagasy, izay anjakan’ny Fihavanana, isorohana amin’ny fifandonana, ny olom-pirenena rehetra.”Hoy ny fanambarana nataon’ny Lalao Ravalomanana tamin’ny mpanao gazety, ny Alatsinainy 23 Aprily. Tonga naneho ny fiaraha-miory amin’ny niharam-boina teny amin’ny Lapan’ny Tanàna ihany koa ny Filohan’ny TIM Marc Ravalomanana mivady. Niray feo ireo Solombavambahoaka voafidy tamin’ny antoko TIM fa ny fanarahana ny Lalam-panorenana no hany vahaolana tokana tsy iverenan’ny krizy. Nanamafy izany ny Depiote Guy Rivo : “Ny fananganana governemanta iraisana no tanjona mba ivoahana amin’ny fifidianana.” Nandritra ny fandraisam-pitenenany ny Depiote voafidy tamin’ny loko politikan’ny TIM teo amin’ny Boriborintany I fa “ Tsy nisy resaka tetezamita tao anatin’ny tolona izay natao fa ny fanomanana fifidianana, araka ny Lalam-panorenana”, hoy Hanitra Razafimanantsoa.
Mihamitombo ny mpitolona
Mitombo isa hatrany ny mpitolona eny amin’ny kianjan’ny 13 Mey, indrindra taorian’ny fanamabaran’ny Prefen’ny polisin’Antananarivo, Angelot Ravelonarivo sy ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Béni Xavier Rasolofonirina, fa omena fahafahana maneho hevitra ny vahoaka ary tsy arovana ny lapan’ny Tanàna. Tsy vitsy ireo te hitolona fa noho ny tahotra ny basy aman-tafondro dia nanao tazan-davitra teny amin’ny faritra avo tahaka an’Ambondrona, Faravohitra, Ambohijatovo, Antaninarenina. Nampahazo vahana ny mpitari-tolona ny rà latsaka ny Sabotsy 21 Avrily teo. Raha iverenana ny tantara dia nahazo alalana tamin’ny Ben’ny Tanana, Lalao Ravalomanana ireo “Solombavambahoaka 73” izay saika hanao tatitra tamin’ny vahoaka, kinanjo tsy nomen’ny Prefen’ny Polisy alalana. Ity farany izay nampidina baiko tamin’ny vondrotafika misahana an’Antananarivo, na ny CIRGN. Rehefa nivanjevo nandritra ny adin’ny roa, tamin’ny baomba mandatsadranomaso sy ny tifitry ny mpitandro filaminan ny vahoaka, tafiditra soamantsara tao anatin’ny Lapan’ny Tanàna ireo Solombavambahoaka sy ny vahoaka. Niandry ny tolakandro anefa vao afaka nifampitafa tamin’ny vahoaka izy ireo, noho ny fanamafisam-peo lasan’ireo mpitandro filaminana. Nanambara ireo olomboafidy tamin’ny fotoana fandraisam-pitenenana, izay nosoloin’ny Depiote Hanitra Razafimanantsoa TIM sy ny ekipan’ny MAPAR tahaka an’i Lanto Rakotomanga, Christine Razanamahasoa fa tsy vita ny tatitra ary mitohy amin’ny fiandrasana ireo faty enina izay lavo. Marihina moa fa niovaova ny isan’ireo nody mandry noho ny mpitari-tolona te hampakatra ny isa, etsy andaniny anefa ny mpitondra sy ny mpiasan’ny HJRA te hampihena izany, indrindra ireo naratra. Nisy tamin’ireto farany anefa no nijoro vavolombelona fa nolazain’ny mpitsabo fa misy zavatra ao anatiny ka mila didina rehefa natao ny fitarafana. Tsy azon’izy ireo anefa ny valin’ny fitarafana sy ny zavatra izay nalana tao anatiny.
Nanao tohy vakana ny fanamelohana ny herisetra, ny fanirian’ny fifampiresahana mba irosoana amin’ny fifidianana, tahaka ny avy amin’ny firaisamonim-pirenena hetsika ROHY, sy ny Vondrona Iraisam-pirenena, ny FFKM, ny FJKM,KMF/CNOE,… . Araka ny loharanom-baovao azo antoka dia manohy ny lalana makany amin’ny tetezamita ny Filoha teo aloha Andry Rajoelina ary efa miroso amin’ny fitokonana faobe. Ny fananganana governemanta iaraha-mitantana anefa no kendren’ny Filoha Marc Ravalomanana mba hahafahany mirotsaka izay saika voasembatsemban’ilay lalàm-pifidianana mampifanditra. Rah any “Bulletin” laharana faha-2 moa no saika hanasakanana ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay ampangaina fa nitifitra ka nahafatesana olona ny 7 Febroary 2009, sy tsy hamelana irotsaka ny Filohan’ny Tetezamita Andry Rajoelina izay nitondra ny vahoaka hovonoina. Araka ny filazan’ireo mpanara-baovao maro dia naloto ary vita tamin’ny 21 Aprily teo koa ny “Bulletin N°2” an’ny Filoha ankehhitriny, noho ny rà latsaka. Marihina anefa fa vao mihemotra ny lalam-pifidianana sy ny fiantsoana vahoaka hifidy dia tsy amintsy hametram-pialana tsy misy fifidianana ny Filoha ankehitriny ny 25 Janoary 2019, raha ny lalampanorenana no zohina. Ary manome fahefana feno ny Filohan’ny Antenimierandoholona, saingy tsy hanaiky izany velively ireo mpitolona ankehitriny. Efa nisy ihany ny fanelanelanana ho fifampiresahana nokarakarain’ny Vondrona Afrikanina teny amin’ny foibe Ankorondrano, ny Alarobia 25 Aprily, saingy tsy nanaiky ny avy amin’ny Depioten’ny Fanovana. Vao maika aza nahazo vahana any amin’ny Faritra ny Fitakiana fametraham-pialan’ny Filoham-pirenena, tahaka ireo vahoaka marobe nandrakotra ny Kianjan’ny fahafahana Antsirabe.